को हुन् वहालवाला अर्थमन्त्री कार्कीलाई टक्कर दिने गणेश ? यस्ता छन् चुनावी एजेण्डा
Monday, 13 Nov, 2017 3:30 PM
दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको प्रचार पहिलो चरणको निर्वाचनका उम्मेदवारहरुकै दाँजोमा छ । दोस्रो चरणमा पनि कयौं निर्वाचन क्षेत्रमा ‘हेविवेट’ नेताहरु भिडन्तमा छन् । रोचक पक्ष त कतिपय क्षेत्रमा ठूला दलका गठबन्धन उम्मेदवारलाई साना दलका उम्मेदवार टाउको दुखाई बनेका छन् । काठमाडौं १ मा विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्र काँग्रेस र माओवादी उम्मेदवारका लागि चुनौति बनेका छन् । मिश्रले जित्ने दाबी गरिरहेका छन् । राजधानीमा विवेकशील साझाका मिश्र र उज्जल थापाको चर्चा भइरहँदा पूर्वको सुनसरी क्षेत्र नं. ४ मा पनि सोही पार्टीका गणेश विष्टले वहालवाला अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पसिना छुटाइरहेका छन् । कार्कीलाई टक्कर दिने विष्ट नामुद अडिटर मानिन्छन् । सुनसरी क्षेत्रमा इमान्दार र सफल अडिटर तथा समाजसेवी मानिएका विष्ट कार्कीका लागि निकै महंगा सावित भइरहेका छन् । न्यूजसेवाले उम्मेदवार विष्टसँग केही चुनावी प्रश्न गरेको छ :
विवेकशील साझा पार्टीबाट तपाईको उम्मेदवारी किन ?
सुनसरी क्षेत्र नं. ४ मा सबै पार्टीबाट पाहुना उमेद्वार बनेका छन् । ठूला पार्टीले पाहुनालाई उठाएका छन् । यो पटकमात्र होइन, विगत २० वर्षदेखि निरन्तर यही चलिरहेको छ । यसकारण यो क्षेत्रका जनताले आफ्नै ठाउँको केन्द्रीय नेतृत्व पाइरहेको अवस्था छैन । जसले गर्दा, यहाँ विकास निर्माण हुन सकेको छैन । जनताका थुप्रै समस्या छन्, तर धनवाद र डनवाद गर्ने राजनीतिकर्मीको बोलबाला छ । यहाँ विगतदेखि नै ठेक्काजस्तै गरेर उम्मेदवारी दिइन्छ । धन नभएका र गुण्डागर्दी नगर्नेले टिकट पाउनै गाह्रो छ । जहिल्यै बाहिरबाट आएकाहरु उम्मेदवार बन्छन्, जित्छन् र आफ्नै ठाउँमा फर्किन्छन् । यो क्षेत्रको समस्या भने जस्ताको तस्तै । काल आयो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर भो । हाम्रो क्षेत्रका भावी पुस्ताले क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व नपाउने अवस्था सिर्जना भएकाले मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
सुनसरी ४ मा तपाईंका अन्य प्रतिश्पर्धी को–को हुनुहुन्छ ?
वहालवाला अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की काँग्रेसका तर्फबाट र वाम गठनबन्धनका रमेश श्रेष्ठ मेरा प्रतिश्पर्धी हुनुहुन्छ । कार्की भोजपुरका स्थायी हुन् भने, श्रेष्ठ पनि यहाँका होइनन् । राजपाका उम्मेदवार पनि स्थानीय होइन । सबै पार्टीले पाहुना उम्मेदवार खडा गरेका छन् ।
तपाईंका प्रतिश्पर्धी निकै ‘हेविवेट’ देखिए, तपाईंले कसरी भोट माग्नुहुन्छ ? तपाईंलाई किन जिताउने जनताले ?
म नष्ट हुँला, तर भ्रष्ट हुन्न । यो मेरो मुख्य शर्त हो । म यो शर्त अंगिकार गरेर जनताको सेवामा लाग्नेछु । अहिले चलिरहेको लुटतन्त्रलाई रोक्ने मेरो प्रतिबद्धता छ । आफ्नै पालामा सम्वृद्धि देखाउने गरी काम गर्छु । आफू यहीँको स्थानीय भएकाले पनि समस्या के छन् र कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण जानकारी छ । सांसद भएँ भने पारिश्रमिक परोपकारमा खर्च गर्छु । त्यहाँको कोशीटापु, चराचुरूंगी, अर्ना, सिमसार क्षेत्रको प्रचारप्रसार, धार्मिक क्षेत्र मस्जिद, बराहक्षेत्र मन्दिरको प्रचार (जसलाई विष्णुको अवतारको रूपमा लिइन्छ), रामधुनी (राम आएर धुनी बसेको ठाउँ)लगायतको प्रचार, संरक्षण र जिर्णोद्वार गिर्छु । सडक, खानेपानी, ढललगायत पूर्वाधार निर्माण गर्छु । यो क्षेत्रको सबै समस्या र सम्भावनाको जानकारी भएकाले केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । पाहुना उम्मेदवारले जिते भने आफ्नै व्यवस्थापनमा लाग्ने हुनाले जनताले उहाँहरुकै हित हेरेर मलाई मत दिनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
अहिले तपाईंको क्षेत्रका समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
मेरो क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या वन्यजन्तुले कृषिमा पुर्याइरहेको ठूलो क्षति होह । यसको रोकथाम गर्नुपर्छ । दोस्रो ः ०४०÷०४१ सम्म रहेका हाम्रा नम्बरी जग्गामा अहिले कोशी बगिरहेको छ । तर, पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । भण्टावारी, लौकही, हरिपुर, हरिनागा क्षेत्रको कयौं जमिन कोशीले बगाएको छ । तर, पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । उनीहरुका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्नेछु । त्यहाँ भित्री क्षेत्रमा सडक निर्माण, पिच तथा अन्य सबै स्थानीय अवश्यकताअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नेछु ।
राजनीतिक कुसंस्कृति विकास भएको छ । ठूला पार्टीले २ करोडभन्दा, ५ करोडदेखि १० करोडसम्म चुनावमा खर्च खर्छन् । सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो । आखिर, यत्रो पैसा कहाँबाट आयो ? सांसद भएपछि कानुनी रुपमा पाउने पारिश्रमिक भनेको ५ वर्षमा ४०–५० लाख रुपैयाँ हो । बाँकी पैसा कसरी र कहाँबाट व्यवस्थापन गर्छन् ? लुटेरबाहेक यो सम्भव नै छैन । तर, म पैसाबिना राजनीतिमा आएको छु । पैसाबिना राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउनु मेरो पहिलो काम हुनेछ । डनवाद र धनवादले होइन, इमान्दारिता र लगनशिलतासहितको एजेण्डा जनताकोमा लैजान्छु । यिनीहरुले (अरुले) राष्ट्र लुट्छन्, म तपाईंकै आँगनमा बसेर विकास निर्माणका काम गर्छु भन्दै जनतालाई बुझाउँदैछु । यो नै मेरो जितको आधार हो ।
आफ्नो जित कत्तिको सुनिश्चित देख्नुहुन्छ ?
मेरो जित सुनिश्चित छ । त्यो क्षेत्रका सबै जनताले बुझेका छन् । युवावर्गमा उत्साह छ मप्रति । अहिलेको राजनीतिक पद्धती र भ्रष्ट्राचारका कारण मानिस निरास छन् । योग्यताभन्दा पैसा खाएर नियुक्ती गर्नेजस्ता कुरा चिर्नुपर्ने छ । यो जनताले बुझेका छन् । त्यसैले मलाई उनीहरुले मतदान गर्छन् र म जित्छु ।